Mpanome sakafo mahavelona maro no mino lasopy avy amin'ny legioma, ilaina amin'ny sakafo isan'andro sy ny fototry ny sakafo mahasalama. Ahoana raha manampy anao hihena ny lasopy?
Sakafo maro samihafa novolavolaina tamin'ny lasopy mandoro tavy, fa raha te handany lanja amin'ny lasopy mandoro tavy ianao, dia tokony hesorina tsy hohanina ireto sakafo manaraka ireto:
nendasina sy matavy.
Ary mazava ho azy, aza adino ny momba ny fampihetseham-batana, izay tsy azonao atao raha tsy hanafainganana ny fizotran'ny metabolika ao amin'ny vatana.
Ny sakafo toy izany dia mety hanintona ireo izay tia mihinana amin'ny fotoana rehetra, satria ny lasopy dia azo hanina amin'ny habetsahana tsy voafetra, izany hoe arakaraky ny fihinanao no vao mainka very anao. Fa ny lasopy mandoro tavy dia azo laniana tsy mihoatra ny 2 herinandro, avy eo dia aza hadino ny maka aina.
Raha ny fanamarihan'ny maro izay manaraka sakafo mifototra amin'ny lasopy mandoro tavy dia very 4 hatramin'ny 8 kg izy ireo tao anatin'ny herinandro. Fa raha tsy mitandrina sakafo ara-dalàna ianao amin'ny ho avy dia hiverina ny zava-drehetra. Ny lasopy dia misy legioma manampy amin'ny fanalana poizina ao amin'ny vatana, fanadiovana azy any, ary ny seleria sy ny sakamalao dia heverina ho singa lehibe mandoro tavy.
Ary noho izany, etsy ambany ireo fomba fahandro vitsivitsy ho an'ny lasopy mandoro tavy.
Akora ilaina: tongolo antonony 1, voatabia mpanelanelana 4, laisoa kely 1, dipoà maitso 2, ron-kena legioma 2 cubes, sira, saosy mafana raha ilaina.
Ny haben'ny kaloria an'ny lasopy isaky ny 100 grama dia 4 kcal fotsiny.
Resipeo lasopy mandoro voatabia
Akora ilaina: voatabia antonony 3, laisoa fotsy 500 grama, tongolo antonony 1, karaoty 1, fakany seleria 30 grama, tongolo lay 2, ahitra ary zava-manitra hanandrana.
Lasopy mandoro tavy laisoa - fomba fahandro
Akora ilaina: antsasaky ny lohan'ny kaoliflower, antsasaky ny lohan'ny laisoa fotsy, karaoty 2-3 salantsalany, tongolo antonony 1, dipoavatra 1, tahon-seleria 6-8, anana sy anana hanandrana, ranom-boasarimakirana iray.
Resipeopy lasopy matavy tongolo
Akora ilaina: tongolo 6, voatabia 2, antsasaky ny loaky ny laisoa fotsy, dipoà lakolosy 2, voasarimakirana 1, tsiro ary zava-maniry hanandrana.
Tsy mitovy ny firafitry ny lasopy mandoro tavy, fa ny lasopy kosa dia miomana amin'ny fomba mitovy. Izahay dia manapaka antsy, afaka kely, afaka manelanelana amin'ny ankapobeny, araka izay itiavanao azy ary mameno rano mangatsiaka azy.
Asio sira sy dipoavatra. Atsofohy amin'ny hafanana ambony mandritra ny 10 minitra, avy eo amin'ny hafanana ambany mandra-pahalemin'ny legioma. Ny resipeo sasany dia manome soso-kevitra ny tongolo sy voatabia saosy kely amin'ny menaka legioma ary avy eo ampio amin'ny lasopy. Na dia tsy soso-kevitra momba ny fihenan-danja aza ny menaka.
Sakafo lasopy - mampihena lanja ao anaty herinandro
Lisitry ny sakafo amin'ny kaloria ratsy ratsy fototra
Lasopy matsiro sy mahasalama tsy misy hena
Prev Ny sakafo Osama Hamdiy dia fomba tsara hampihenana ny lanja
Manaraka Sakafo Japoney tsy misy sira - mampihena ny lanjany amin'ny fomba mandaitra
58 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,693.